Iwo Akanyanya Kupisa Shungu dzeArduino | Mahara emahara
Vashandisi veNovice kana vashandisi vari kutanga kudzidza kushandisa mabhodhi emagetsi vanowanzo dzidza kushandisa mwenje dze LED uye zvirongwa zvinoenderana. Mushure memwenje, kazhinji, vashandisi vazhinji vanotanga kudzidza kushandisa sensors tembiricha.
Tevere isu tichataura nezvazvo iyo tembiricha sensors aripo eArduino, avo akanaka mapoinzi, avo asina kunaka mapoinzi uye ndeapi mapurojekiti atinogona kuita navo chaizvo.
1 Chii chinonzi sensor yekushisa?
2 Ndedzipi sarudzo dzandinadzo dzeangu Arduino bhodhi?
2.1 Yekupisa sensor MLX90614ESF
2.2 Thermocouple Rudzi-k Sensor
2.3 Arduino DHT22 yekushisa sensor
2.4 Arduino TC74 tembiricha sensor
2.5 Arduino LM35 yekushisa sensor
3 Ndeapi mapurojekiti atinogona kugadzira ine tembiricha sensor yeArduino?
4 Zvinokurudzirwa here kushandisa inodziya tembiricha kune yedu Arduino?
Chii chinonzi sensor yekushisa?
Iyo yekushisa tembiricha chinhu chinounganidza iyo tembiricha uye / kana hunyoro kubva kunze uye ichichichinja kuita dhijitari kana yemagetsi chiratidzo iyo yainotumira kune yemagetsi bhodhi senge Arduino bhodhi. Kune akawanda marudzi ema sensors uye enzvimbo zhinji. Tine kubvira iyo tembiricha yekunzwa yeamateurs yatinogona kuwana ye2 euros kune nyanzvi tembiricha sensors iyo inodhura angangoita 200 euros pauniti. Musiyano uripo pakati pemutengo wekushisa wakachipa uye inodhura tembiricha sensor iri mukuita kwayinoita.
Iyo chaiyo pakati peiyo chaiyo tembiricha uye iyo tembiricha tembiricha ndeimwe yezvakanyanya kukanganisa zvinhu kana zvasvika pakusiyanisa; Chimwe chinhu chinoshanduka ndiko kupisa uye padiki tembiricha iyo yavanobvumira, kuve nyanzvi tembiricha sensor iyo inotsigira mamwe madhigirii. Nguva yekupindura, kunzwisisika kana kukanganisa zvimwe zvinhu zvinosiyanisa imwe tembiricha yekunzwa kubva kune imwe.. Chero zvazvingaitika, zvese zviripo kune edu mapurojekiti uye chete mutengo wazvo unogona kudzikisira kutenga kweimwe kana imwe.
Ndedzipi sarudzo dzandinadzo dzeangu Arduino bhodhi?
Pano tinokuratidza mamwe maseru anonyanya kuzivikanwa uye akakurumbira atinogona kuwana mune chero chitoro chemagetsi kana kuburikidza nezvitoro zvepamhepo nemutengo mudiki kana kuburikidza nemapakeji ane zvikamu zvakawanda nemutengo wakaderera. Havasi ivo voga asi Hongu, ivo ndivo vanozivikanwa kwazvo uye vanozivikanwa neArduino Nharaunda, iyo inova nechokwadi chekuti tichava nerutsigiro rwakakura pane yega yega tembiricha sensor.
Yekupisa sensor MLX90614ESF
Kunyangwe uine zita risinganzwisisike, chokwadi ndechekuti iyo Yekupisa sensor MLX90614ESF Iyo inonzwa tembiricha inoshandisa infrared mwenje kuyera tembiricha. Iyi sensor saka inoda uve nemunda wekutarisa 90º uye avhareji tembiricha inotora inoitumira kuburikidza ne10-bit chiratidzo kuArduino bhodhi. Iyo chiratidzo inotumirwa manhamba zvichitevera iyo I2C protocol kana isu tinogona zvakare kushandisa PWM protocol. Kunyangwe iine hunyanzvi hwemberi, iyi sensor ine mutengo wakaderera, tinogona kuiwana muzvitoro zvemagetsi zveinosvika € 13, mutengo wakaderera kana tichifunga nezve mikana yavanopa.
Thermocouple Rudzi-k Sensor
Iyo Thermocouple Type-K sensor inyanzvi sensor inotsigira yakanyanya tembiricha. Maumbirwo aro akareruka sezvo ichingova tambo dzesimbi idzo dzakatengeswa kune mushanduri ndiyo inoburitsa chiratidzo kuArduino. Iyi sisitimu inogadzira iyo Thermocouple Type-K Sensor unokwanisa tora tembiricha pakati -200º C uye 1350ºC angangoita, hapana chekuita nema sensors evanozvivaraidza nazvo, asi zvakare inoita kuti iyi sensor iitirwe mapurojekiti ehunyanzvi akadai semabhaira, zvigadzirwa zvekuyera kana zvimwe zvishandiso zvinoda kupisa kwakanyanya.
Arduino DHT22 yekushisa sensor
Iyo tembiricha sensor Arduino DHT22 es dhijitari tembiricha sensor iyo haingounganidze tembiricha chete asi zvakare inounganidza hunyoro hwezvakatipoteredza. Iyo chiratidzo inotumirwa kuArduino kuburikidza ne 16-bit dijitari chiratidzo. Iwo matembiricha ayo recoge murume uyu ari pakati -40º C uye 80º C. Mutengo weiyi sensor unosvika ku5,31 euros pachikamu. Mutengo wakakwirira kupfuura mamwe ma sensors asi izvo zvinoruramiswa muhunhu hweiyo sensor iyo yakakwira kupfuura mune mamwe ma sensors.
Arduino TC74 tembiricha sensor
Tembiricha yekupisa Arduino TC74 inzwa inoburitsa chiratidzo chedigital Kusiyana nemamwe ma sensors anoiburitsa nenzira yeanalogog. Iyi sensor inopfuudza kuburikidza ne8-bit dijitari chiratidzo. Mutengo weiyi sensor hauna kudzika zvakanyanya asi hauna kukwirira zvakanyanya, kazhinji kutenderedza mashanu euros pachikamu. Iyo Arduino TC5 yekushisa sensor kutaurirana kunoitwa uchishandisa iyo I74C protocol. Iyo tembiricha renji inounganidzwa neiyi sensor iri pakati los -40ºC uye 125ºC.
Arduino LM35 yekushisa sensor
Iyo Arduino LM35 tembiricha yekunzwa inzira isingadhuri iyo inoshandiswa kune hobbyist mapurojekiti. Kuburitswa kweiyi sensor analogog uye kuyerwa kunoitwa zvakananga mumadhigirii Celsius. Kunyangwe isu tichifanira kutaura kuti iyi sensor haitsigire yakanyanya tembiricha. Iyo tembiricha iyo yainobvuma iri pakati pe2º C uye 150º C. Izvi zvinoreva kuti haigone kuburitsa tembiricha yakaipa uye ndosaka yakakosha pakudzidza mashandisiro emagetsi ekupisa. Mutengo waro unoperekedza, sezvatinogona tsvaga gumi sensors e10 euros (inenge).
Ndeapi mapurojekiti atinogona kugadzira ine tembiricha sensor yeArduino?
Kune akawanda mapurojekiti atinogona kuita neyekushisa sensor uye yeArduino bhodhi. Iyo yakakosha purojekiti yezvose ndeyekugadzira iyo thermometer iyo inoratidza padhi tembiricha. Kubva pano tinogona kugadzira mamwe macompound mapurojekiti senge maomator anoita imwe chiito mushure mekusvika kune imwe tembiricha, tumira mamwe masaini aine imwe tembiricha kana kungoisa iyo tembiricha senzvimbo yekuchengetedza kudzima hob kana muchina kana uchinge wasvika kune kumwe kupisa mukati.
Zita uye nhamba yemapurojekiti atinogona kuita neyekushisa sensor muArduino yakakura kwazvo, kwete pasina, inowanzo kuve chimwe chezvinhu zvekutanga zvinowanzodzidziswa nemushandisi. Vhura Mirayiridzo tinogona kuwana mienzaniso yakati wandei yemashandisiro ayo.
Zvinokurudzirwa here kushandisa inodziya tembiricha kune yedu Arduino?
Ini ndinofunga kuti kudzidza mashandisiro ekushisa tembiricha muArduino kwakakosha uye kwakakosha. Kwete chete yekuziva uye kushandisa ese Arduino accessories asi kugona kubata tembiricha data uye kurishandisa kuzvirongwa zvinoshanda paArduino. Asi ini handikurudzire kushandiswa kwehunyanzvi maseru, zvirinani muzvimakwenenzverwa uye nekuvandudza kwezvinhu.
Ini ndinofunga zvaizokurudzirwa kutanga shandisa sensors kune amateurs uye kana zvese zvinhu zvadzorwa uye yekupedzisira projekiti inogadzirwa, saka kana iwe ukashandisa nyanzvi sensor. Icho chikonzero cheichi mutengo. Iyo yekushisa tembiricha inogona kukuvadzwa nemamiriro akasiyana siyana uye amateur sensors anogona kutsiviwa isingasvike maviri euros. Panzvimbo iyoyo, kushandisa yehunyanzvi tembiricha sensor inowedzera mutengo ne100.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Arduino » Tembiricha yekupisa yeArduino